AMASKI OBUSO BE-DIY ABESILISA UKUTHOLA ISIKHUMBA ESIHLE - PAMPEREDPEOPLENY.COM - UBUHLE
Ama-Masks Obuso be-DIY Abesilisa Ukuthola Isikhumba Esihle
Ezemidlalo I-IPL 2021: Ngisebenze ekushayeni kwami ​​ngemuva kokunganakwa endalini ka-2018, kusho uHarshal Patel
Ama-movie UGudi Padwa 2021: UMadhuri Dixit Uyakhumbula Ukugubha Umkhosi Omuhle Nomndeni Wakhe
Ikhaya Ubuhle Ukunakekelwa kwesikhumba Skin Care oi-Abasebenzi Ngu USaaransh Arora ngoSepthemba 26, 2018
Amadoda amaningi ezweni lethu afisa ukuba nesikhumba esifanele futhi yingakho azama okhilimu abaningi nabathengisi abaningi ukuze bazenze babonakale belungile. Kwesinye isikhathi, lawa makhilimu nama-lotion angadala umonakalo omkhulu esikhunjeni ngenxa yamakhemikhali akhona kuwo. Ukusebenzisa ikhambi lasekhaya lemvelo akukaze kulimaze isikhumba, ngoba singamakhambi ngokuphelele futhi akanawo amakhemikhali alimaza isikhumba.
Okhilimu abatholakala kwezentengiselwano nabo bangabiza kakhulu kwesinye isikhathi, okushisa imbobo ephaketheni kubantu abaningi. Noma kunjalo, kuhlale kunenye indlela! Futhi lapha sethula okufanayo. Nawa amaphakethe wobuso bemvelo wamadoda angakusiza ukuthi uthole ithoni yesikhumba efanelekile.
Enye inkinga enkulu ukungcola nothuli sonke esibhekana nakho emini. Izinhlayiya zokungcola ziyabanjwa ezimbotsheni, ngaleyo ndlela zenze isikhumba sibe buthuntu. Ngakho-ke, isinyathelo sokuqala ukugeza ubuso bakho nsuku zonke ukuze ususe noma ikuphi ukungcola.
ungadla kanjani upapa ngokukhipha isisu
Uma isikhumba sakho somile, ungazama ukugeza ubuso nesithambisi. Lokhu kuzohlanza zonke izinhlayiya zothuli ezinamathele kuma-pores akho. Ungasebenzisa uju, ngoba lusiza ukuhlanza isikhumba, sisishiye sinamanzi futhi sithambile.
Enye indlela enhle ongazama ukuyenza iBesan noma i-Gram Flour, ngoba isiza ukucwilisa wonke uwoyela oweqile futhi ayinayo imiphumela emibi esikhumbeni.
Manje, lokho akusekho endleleni, nansi imaski yobuso amadoda angazama ukuthola ithoni yesikhumba enhle. Bheka.
1. Uju Lemon Face Imaski
Lokhu kungenye yezimaski ezihamba phambili zamadoda, njengoba isikhumba sabo simahaba uma kuqhathaniswa nabesifazane. ILamula ngumthombo ohamba phambili weVithamini C, esiza ekukhanyeni isikhumba ngokususa isikhumba esifile futhi yandisa ukukhula okusha kwamaseli.
UVitamin C wehlisa izinga le-melanin okuholela ekutheni kwakheke amangqamuzana amasha amhlophe nakhanyayo. Uju luyisithambisi semvelo esigcina isikhumba sihlanzekile futhi sinciphise ukoma. Ukugwema ukusha okuqhubekayo kwesikhumba, sebenzisa i-lotion yesikrini selanga lapho uphuma elangeni.
Ulamula: 1 isipuni
Uju: 1 isipuni
Faka uju nolamula esitsheni bese ukuhlanganisa kahle. Faka isifihla-buso ebusweni bakho bese usishiya imizuzu engama-20. Geza ngamanzi abandayo. Phinda le nqubo okungenani kanye ngesonto ukuze uthole imiphumela ehlala njalo.
Amadoda anezinduna nawo angasebenzisa leli phakethe ukunciphisa izinduna nesikhumba esimnyama.
2.I-Aloe Vera Nejusi Ewolintshi
Leli phakethe lilungele zonke izinhlobo zesikhumba, ngoba lingathambisa isikhumba esomile futhi lisuse uwoyela omningi esikhunjeni esinamafutha. Ijusi lewolintshi lihlinzeka ngoVithamini C, okwenza izingqimba zesikhumba zikhanye. I-aloe vera pulp inezinto zokwelapha zokwelapha noma yikuphi ukutheleleka okuncane kwesikhumba noma ukucasuka. Lokhu futhi kungasebenza njengendlela yokulawula uwoyela kwabesilisa abanesikhumba esinamafutha.
imiphumela emibi yocansi oluningi
I-Aloe Vera: 2 wezipuni
Ijusi le-Orenji: nendebe ye-frac14
Hlanganisa i-aloe vera nejusi lewolintshi kahle, ugcobe bese ulishiya imizuzu eyi-15. Hlanza ngamanzi ahlanzekile.
ungasusa kanjani ubumnyama obuzungeze umlomo ngokushesha
3. Ubhanana neCurd Pack
Ubhanana unezela elicebile lamaVithamini A, B, C, no-E namaminerali afana ne-phosphorus, ithusi, i-zinc, njll. I-Curd, eyaziwa kangcono njenge-yogurt, iyisithunywa esikhanyisa isikhumba futhi ilungele izinhlobo zombili zesikhumba ezomile nezinamafutha. Vele uqiniseke ukuthi akukho okuqukethwe okunamafutha kuwo.
Ubhanana: 1 ucezu oluncane
I-yogurt: 1-2 wezipuni
Mash ubhanana bese ufaka iyogathi, uhlanganise kahle ukuze wenze ubushelelezi. Faka isicelo bese uyishiya yomile cishe imizuzu engama-20. Hlanza ngamanzi apholile.
4. Ushukela Noju Lokukhuhla
Lokhu kukhuhla kuyindlela enhle yokuhlanza isikhumba nokususa amakhanda amnyama. Futhi, lokhu kusiza ekususeni uwoyela omningi esikhunjeni. Uju lunondla isikhumba futhi lunciphisa ukoma. Sebenzisa lesi khuhla ngaphambi kokufaka noma yimaphi amaski obuso ashiwo ngenhla ukuthola imiphumela engcono.
Ushukela: 1 isipuni
Hlanganisa uju noshukela bese ukugoqoza kahle. Manje, faka futhi uhlikihle ubuso bakho imizuzu engama-20 ukukhipha isikhumba. Geza ngamanzi ahlanzekile bese usula ubuso bakho. Khumbula ukulinda isikhathi esithile ngemuva kokugeza ubuso bakho, ngoba izimbotshana zesikhumba sakho zisengavuleka futhi zingadonsela ukungcola okwengeziwe.
Izeluleko Ezibalulekile Zokukhumbula Ukuthola Ithoni Yesikhumba Elinhle
Phuza Amanzi: Sebenzisa amanzi amaningi ukuzigcina unamanzi amaningi. Amanzi agcina isikhumba sakho sinamanzi futhi anganciphisa nezinduna.
Khuhla: Hlikihla isikhumba sakho amahlandla amabili ngesonto ukuze ususe zonke izinhlayiya zothuli, ezivimbela ukukhanya kwakho ngokwakha ungqimba olumnyama lwesikhumba.
kanjani ukuqeda uju izinyosi
Amaphakethe wobuso: Faka amaphakethe wobuso esikhaleni esijwayelekile futhi uvikele noma yimaphi amakhefu ukuze ugcine isikhumba sakho sihlanzekile futhi sikhazimula. Njalo gcoba i-sunscreen ngaphambi kokuphuma elangeni ukugwema noma yikuphi ukufiphala.
Ukudla: Zama ukudla ukudla okunomsoco okugcwele amafutha anempilo, amavithamini, amaminerali, amaprotheni, njll. Lokhu kuzogcina isikhumba sakho sisesimweni esihle futhi kuthuthukise ithoni yesikhumba.
Ukuthambisa: Sula isikhumba sakho imini nobusuku ngokusho kohlobo lwesikhumba sakho ukusigcina sinamanzi futhi singenawo uwoyela omile noma owomile.
amagama amahle kakhulu omfana ongumHindu angama-2016
ungayeka kanjani ukuhona nge-yoga
izinzuzo zokudla ukhukhunathi ngesikhathi sokukhulelwa
isanqante halwa iresiphi igxathu negxathu
ingabe imbewu yefennel inyusa usayizi webele
uwoyela omuhle kakhulu wokusikhipha umzimba ngesikhumba esihle
Ungalibeka kanjani iqabunga likabhanana nge-sadya